Sina Tshirt fanatanjahantena fanao vao vita pirinty natao ho an'ny lehilahy orinasa mpamokatra china sy mpanamboatra | Ruisheng
Tshirt fanatanjahan-tena mahazatra indrindra natao pirinty ho an'ny lehilahy china
Firy bebe kokoa no azonao manokana noho ny lobaka voatondro namboarina?
Hajao ny mpanazatra anao, ny mpirotsaka an-tsitrapo, ny mpiasa, ny havanao, ny namanao na ny tenanao amin'ny fahatsiarovana mahafinaritra. Mba hanehoana ny fankasitrahanao dia avelao hanome anao akanjo tsy misy fehin-kibo miaraka amin'ny Rakitsary ianao ary sary, orinasa na Team Team, Design miavaka, na sonia ACTUAL voafidy ao amin'ny KOLONDRANA.
Toerana niaviany Jiangsu
Anarana marika Ruisheng
Laharana modely lehilahy lobaka
endri-javatra Mampangorona, Vony fanampiny
Lanjan'ny lamba 200 Gram
Quantity misy 1000
Material 100% COTTON \_ Custom
Akanjo tanany Fehin-kibo fohy
Design Miaraka amin'ny Modely
Karazana lamina namboarina
Style Smart sembana
Type lamba tenona
Famantarana Logo voarindra
pirinty natao tamin'ny Fanontana printy
Colors Loko namboarina manokana
Fandefasana Amin'ny maha-ruquest anao
Payment Afaka mifampiresaka
Technics Fanontana famindrana hafanana na fizotry ny habeny mafana
1. Miara-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina fanatanjahan-tena, yoga ary hetsika ivelan'ny trano izahay, miaraka amin'ny iray amin'ireo mpamokatra tsara indrindra eran-tany, amin'ny fampiasana teknolojia sy fitaovana vaovao novolavolain'ny tena mba hamokarana ireo vokatra tsara indrindra miaraka amin'ny akanjo milay, avo lenta ary haitao.
2. tonga lafatra ho an'ny miasa, ivelan'ny milalao na amin'ny lalao golf
3. bokotra 3 vita madio sy vozon'akanjo tsy misy marika
1. Hafiriana no ahafahako mahazo ny valiny aorian'ny nandefasantsika ny famotorana?
Hamaly anao izahay ao anatin'ny 12 ora.
2. azonao atao ve ny mamolavola azy?
Mazava ho azy, misy ny volavola namboarinao (OEM / ODM).
3. Azonao atao ve ny manamboatra ny volavolainay ho an'ny fonosana?
Eny, pls mandefa anay ny endrika ilainao, hanome lanja ny vidiny isika ary hanao ny mitovy fonosana miorina amin'ny volavolanao. Na koa manana fonosana vitsivitsy ho an'ny fanamarinanao izahay.
4. Inona no fotoana iraisan'ny rehetra amin'ny fandefasana baiko?
Famokarana kely: 3-4 andro Famokarana faobe: 7-15 andro na miorina amin'ny qtyo.
5. Karazana fandefasana inona no anananao?
DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, sns.
6. Inona no azonao avy aminay?
Vokatra tena tsara (endrika tsy manam-paharoa, milina fanontana mialoha, fanaraha-maso kalitao henjana) Fivarotana mivantana (vidiny mirary sy mifaninana) Serivisy lehibe (OEM, ODM, serivisy aorian'ny fivarotana, fanaterana haingana) Professional.
Previous: 100% polyamide waterproof malefaka ho an'ny lehilahy
Manaraka: mens Yoga Clothes Tummy control High waisted Workout Yoga Leggings
China 100% landy lehilahy akanjo lava lava lava